China Umthengisi we powder i-Glutathione e-china mveliso kunye nabenzi | Guanlang
Iglasi yezithambiso i-GSH l-Glutathione / lglutathione Powder yehliselwe isikhumba esimhlophe somthengisi wempuphu yeglathathione e-china
Singomnye wabakhokeli be-glutathione powder kunye nomenzi we-china, ukuba ufuna ukuthenga i-glutathione powder, zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngesampuli kunye nexabiso.
Igama leMveliso: L-glutathione incitshisiwe
Inombolo ye-CAS ::70-18-8
Amanye amagama: l-glutathione
I-EINECS Inombolo 2: 00-725-4
Ukucoceka: 99% min
Ukusukela ngonyaka ka-2007, singomnye wabaphambili glutathione Umthengisi kunye nomenzi wasechina
IGlutathione (GSH) ibizwa ngokuba yi-Reducut glutathione okanye i-L-GlutathioneIncitshisiwe, i-antioxidant ebalulekileyo kwizityalo, izilwanyana, ifungi, kunye nezinye iintsholongwane kunye neArchaea, umgubo omhlophe wekristallini. I-atripeptide enonxibelelwano lwe-gamma peptide phakathi kweqela le-carboxyl yecandelo le-glutamate kunye neqela le-amine ye-cysteine, kunye neqela le-carboxyl le-cysteine ​​eliqhotyoshelwe ngonxibelelwano oluqhelekileyo lwe-peptide kwi-glycine. malunga ne-5 mM kwiiseli zezilwanyana. I-Glutathione inciphisa i-disulfide bond eyakhiwe ngaphakathi kwe-cytoplasmicproteins kwii-cysteines ngokusebenza njengomnikeli we-elektron. Kwinkqubo, i-glutathione iguqulelwa kwifom yayo ene-oxidized, glutathione disulfide (GSSG), ekwabizwa ngokubaL-glutathione.
Isinyithi esinzima 10ppm
Ukuphulukana nokomisa (3h kwi-105 ℃) ≤0.5%
L-glutathione oxidized .51.5%
Ukungcola okupheleleyo ≤2.0%
Uvavanyo (isiseko esomileyo) I-98.0% ukuya kwi-101.0%
1. Khusela isibindi kwaye uphathe izifo ezinxulumene nesibindi.
2.Treat amathumba kunye nokunciphisa iziphumo ebezingalindelekanga chemotherapy kunye nonyango.
I-3.Glutathione njenge-antidote, inokudibanisa nezinto ezinobuthi, ii-ion zentsimbi enzima okanye izinto ze-carcinogenic ukukhuthaza ukuphuma kwazo. Ingasetyenziselwa unyango lwe-detoxification ye-acrylonitrile, i-fluoride, i-carbon monoxide, isinyithi esinzima kunye nezinye izinyibilikisi eziphilayo.
4.Nyanga izifo zamehlo, ngakumbi cataract.
5.I-Glutathione inokulawula ukungalingani kwe-acetylcholine kunye ne-cholinesterase. Idlala indima echasayo.
6. Izifundo zamva nje zibonise ukuba i-glutathione inokuba nefuthe lokuthintela intsholongwane kagawulayo.
Ukutya kunye nokusetyenziswa:
I-1.Glutathione elingana ne-vitamin C, inokongezwa kwi-yogurt kunye nokutya kwabantwana kwaye idlale indima yokuzinzisa;
2.Kuba i-glutathione inokuthintela i-pigmentation, inokongezwa kwiziqhamo ezinamathanga ukunqanda ukuBrowning;
3. Ngenxa yokuncitshiswa kweGlutathione, inokongezwa kwimveliso yomgubo wokudlala indima yokunciphisa kunye nokomeleza i-amino acid;
Ukongeza i-Glutathione kwisonka kunokunciphisa ixesha lokuxuba kwinkqubo yokuvelisa
5. IGlutathione inencasa eyomeleleyo yenyama xa ixutywe ne-L-glutamate, i-nucleic acid flavoring izinto okanye umxube wazo.
IGlutathione inokuthintela i-acid ye-nucleic kunye nokunyusa incasa kwikhekhe leentlanzi.
6.I-Glutathione inokuphucula incasa yenyama, itshizi kunye nezinye iimveliso zokutya.
7.Iintlobo ezahlukeneyo zokutya okusebenzayo kunye nokutya okusempilweni okulungiselelwe nge-glutathione njengento esebenzayo esebenzayo.
Zokuthambisa kunye izicelo:
I-1.Glutathione inokucoca ii-cytotoxic izinto. Ukusetyenziswa kweemveliso zokhathalelo lolusu kunganyanga kwaye kunciphise izinyithi ezinzima kakhulu kulusu kunye neetyhefu eluthulini.
2. IGlutathione yintsholongwane echasene nokuguga. Ingasusa ii-radicals simahla emzimbeni kwaye igcine imisebenzi yebhayoloji yeeproteni kunye nee-enzymes. Yeyona nto iphambili yasimahla yokufunwa ngumzimba emzimbeni, ukuze impendulo eyoji yasimahla eqhubekekayo iqhubeke.
I-3.Glutathione inefuthe elimhlophe lokumhlophe ngokufakwa kwe-transdermal. Ithintela ukuveliswa kweeradicals simahla kunye
Iiperoksayidi ezivela kwi-melanin ukunciphisa imisebenzi ye-biochemical ye-melanocytes kunye nokunciphisa izinto ezinobuthi kwi-cell pigment.
Ekugqibeleni ikhusela iiseli zombala kwi-necrosis kunye ne-metamorphism.
Egqithileyo I-China Umgangatho ophezulu wokulahleka kobunzima bePowder 99% ye-Orlistat yomthengisi wempuphu e-china CAS 96829-58-2
Okulandelayo: I-Zinc Pyrithione Detergent I-Raw Materials yoKhathalelo lweeNwele zeKhemikhali I-Zinc Pyrithione ZPT Powder yomvelisi womthengisi e-china
Umthengisi we-glutathione powder
Umthengisi we-glutathione powder e-china
I-NMN / β-Nicotinamide mononucleotide yomthengisi kwi ...
I-China Umgangatho ophezulu wokuPhulukana nePowder 99% Orlis ...